Waa Maxay Ganacsi? ………Qormada 2aad | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maafiyadii Socod Baradka Aheyd!
Warsame Maxamed Nuur Garaad Noor — May 2, 2018
Noocyada lahaanshaha ganacsigu way kala duwan yihiin, laakiin dhowr hay’adood oo badan ayaa jira: Si aan u sii amabqaadno qormadeena waa inaan wax yar ku laabanaa ganacsiga gaarka ah. Ganacsi gaar ah: Ganacsi qaas ah, oo loo yaqaano ganacsade keligiis ah, waxaa iska leh hal qof wuxuuna ku shaqeeyaa faa’iido doon. Milkiiluhu wuxuu ka shaqeeyaa kali ahaan wuxuuna shaqaaleysiiyaa shaqaale kale. Qof ganacsade ah ayaa leh masuuliyad aan xadidneyn oo ah dhammaan waajibaadyada uu soo saaro ganacsiga, ha ahaato kharashka hawlgalka ama xukunka ka dhanka ah ganacsiga.
Dhammaan hantida ganacsigu waxay leedahay ganacsade kaliya, oo ay ka mid yihiin, tusaale ahaan, kaabayaasha kombiyuutarka, wixii alaab ah, qalabka wax soo saarka, ama qalabka tafaariiqda, iyo waliba hantida dhabta ah ee uu leeyahay hantiilaha keligii ah.
Iskaashiga: Shuraako waa ganacsi ay leeyihiin laba qof ama in ka badan. Noocyada kala duwan ee shuraako, lamaane kasta wuxuu leeyahay masuuliyad xaddidan oo ah deymaha ay gashay iskaashadaas ganacsiga ah isla maareenteeda iyo isla ogaashadeeda,iskaashatada waxa ay keedahay hab u gaar iyo qaanuuno ay raacdo oo ay isla meel mariyeen kuwa iskaashanaya.
Saddexda nooc ee ugu wayn ee iskaashiga faa’iido doonka ah.
waa:- iskaashiga guud, iskaashiga xaddidan, iyo wada-xaajoodley xadidan.
Shirkadda: Mulkiilayaasha shirkaduhu waxay leeyihiin howlo xadidan oo ganacsi ah waxay leeyihiin shakhsiyaad sharciyeed gaar.
Milkiilayadda shirkaduhu waxay noqon karaan kuwo dawladdu leedahay ama Gaar loo leeyahay. Waxay qabanqaabin karaan midkood faa’iido doon ah ama ururo aan faa’iido doon ahayn. Shirkadda gaar mararka qaar waxay noqon kartaa mid leh saamilayaal, kuwaas oo dooranaya guddi maamul oo u hogaaminaya shirkadda,waxayna shaqaaleeyaan shaqaalahooda maamulka.
Shirkad gaar ah, shirkad doon waxay noqon kartaa mid si gaar ah loo qabto koox yar oo shakhsiyaad ah, ama si guud loo qabto, iyada oo lala wadaago saamiyada dadweynaha ee liis gareynaya is-dhaafsiga saamiyada.
Wadashaqeyn: Inta badan loo yaqaan “co-op”, iskaashatadu waa ganacsi xaddidan oo abaabuli kara faa’idada ama faa’iido la’aanta. Iskaashatadu waxay ka duwantahay shirkad in ay leedahay xubno, ma ahan saamileyaal, waxayna wadaagaan hay’adaha go’aan qaadashada. Maamulka isku xirka Kombiyuutarada ayaa sida caadiga ah lagu tilmaamaa in ay yihiin labada wada-hawlgala ee macaamilka ama iskaashatada shaqaalaha. Iskaashatada ayaa aasaas u ah fikirka dimoqraadiyada dhaqaalaha.
Shirkadaha xaddidan ee loo yaqaan (LLC), iskaashiga xadidan ee iyo noocyada kale ee shirkadaha ganacsiga ayaa ilaaliya mulkiileyaashooda ama saamileeyda ganacsigooda ku fashilantay ama kuwa ku najaxay howshooda iyagoo ganacsi ka sameeya qayb sharci oo gaar ah oo leh iyo difaac sharciyeed,Taa bedelkeeda, ganacsiyada aan ganacsiga lahayn ama dadka iskood u shaqeysta inta badan maaha sida ilaalinta nadaamka iskaashiga.
Franchises: Waa nidaam ay ganacsatadu iibsadaan xuquuqda ay u leeyihiin in ay ganacsi ka furaankaraan shirkad weyn waan nadaam ssami wadaag ah. Franchising-ka waxaa ku dhaqma ganacsatada mareekanka waana mid ku baahsan cariga ameerika waa mid baahsan oo leh awood dhaqaale oo waaweyn. Mid ka mid ah ama laba ka mid ah ganacsiyada tafaariiqda ee Maraykanka ayaa la furfuray lana hormariyay lagu dabaqay oo lagu bulaaliyay nadaamkana awood siinta waxaa ku badan ameerika 8 milyan oo qofna waxay ku shaqeeyaan qaabkan ganacsi ee la yiraahdo Franchise .
Shirkad xaddidan oo dammaanada leh. Caadi ahaan waxaa loo isticmaalaa meelaha shirkadaha loo abuuro ujeedo aan ganacsi ahayn, sida naadiyada ama ururada samafalka. Xubnaha ayaa ku ballanqaadaya bixinta qaddar gaar ah (sida caadiga ah) si ay shirkaddu u galaan dejinta qorshe shaqo oo keena faaido ama khasaare, laakiin haddii kale, ma laha xuquuq dhaqaale oo ku saabsan shirkadda.
Nooca kan shirkadda ah wuxuu ku badan yahay England. Shirkadda xaddidan dammaanadda leh waxaa laga yaabaa inay la socoto ama ay laheyn raasumaal. Shirkad xadidan ee saamiyada. Noocan waa nooca ugu caansan ee shirkadda loo isticmaalo ganacsiyada. Gaar ahaan, shirkad xaddidan waa shirkad “dammaanad qaadaysa saamileyda waxay ku kooban tahay xadiga shakhsi ahaaneed ee ay maalgeliso” shirkadaha leh “tusaale ahaan sida caadiga ah ee shirkad kooban.”
Shirkadan noocan ah waxay caan ku tahay England iyo wadamo badan oo Ingiriiska ku hadla. Shirkada xaddidan saamiyada waxay noqon kartaa Shirkad furan oo ganacsi ama shirkad gaar loo leeyahay.
…………..Qeebtaanna halkaa ha inoo joogto Insha-allah, waan sii wadi doonaa.
Tags: Waa Maxay Ganacsi? Qormada 2 Qeebta 3
Next post Waa Maxay Cudurka Eydhis-ka?
Previous post Kuma Uur-samin??